Fikarohana momba ny firaisana Blanche Bautista Reincarnation Story: Fihetseham-po iray avy amin'ny fiainana taloha - Fikarohana momba ny fanambadiana vatana
Ahoana no nahatonga izany? Fahatsiarovana ny fiainam-baventy fahiny tamin'ny fahazazany
From: Unlearned Language ary Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao,
Fianakaviana teraka indray ao an-tokantrano ary tranga iray amin'ny fiteny Xenoglossy avy amin'ny fiainana taloha
Ity tranga ity dia mampiseho fa afaka mamindra fo ao anatin'ny fianakaviana iray ihany ny olona. Mampiseho ny tranga iray amin'ny xenoglossy ihany koa izy io, satria fony mbola zaza i Blanche Bautista dia nitanisa hira iray tamin'ny teny frantsay, fiteny izay tsy nianarany tamin'ny fomba mahazatra. Ankoatra izany, ny fitoviana ara-batana dia voamarika avy amin'ny fampidirana iray hafa.
Blanche avy any Italie
Flornida Bautista dia kapitenin'ny tafika Italiana. Nipetraka tany Roma izy sy ny vadiny, nipoitra teo amin'ny ankavanana, ary nanan-janaka antsoina hoe Blanche izy ireo. Nanana mpanompo avy ao Soisa izy ireo, antsoina hoe Maria, izay niteny frantsay fotsiny.
Nihomehy tamin'ny teny frantsay i Blanche, mba hampatoriana azy. Nianatra ny hihira ity sangisangy frantsay ity i Blanche. Indrisy anefa, maty i Blanche tamin'ny 1902 fony izy vao 2 taona. Rehefa maty i Blanche dia nandao ny fianakaviany i Mary ary niverina tany Soisa
Blanche Mifampiresaka amin'ny foibe ara-panahy
Telo taona taty aoriana dia mbola bevohoka indray ny Signora Bautista, vadin'i Flornida. Rehefa bevohoka telo volana izy, dia nahazo fahitana i Signora Bautista izay nahazoany hafatra izay naverin'i Blanche tany amin'ny fianakaviana.
Nanazava ny kapiteny Flornida Bautista fa tamin'ny volana 1905 dia nandry teo am-pandriana izy mivady. Nolazainy avy eo fa nitantara ny vadiny ny tovolahy iray izay toa zanakavavy kely, Blanche.
Ao anatin'ilay fahitana ilay zazavavy kely dia niteny tamim-pifaliana hoe: "Mama, miverina aho." Nanjavona ilay sary. (1)
Ny zazavavy kely dia teraka tamin'ny Febroary 1906, izay nantsoina koa hoe Blanche. Ny ray aman-dreny dia nanamarika fa ny faharoa Blanche dia tena mitovy amin'ny voalohany, miaraka amin'ny maso matevina sy manodidina ary volo mainty.
Tamin'ny dimy taona i Blanche faharoa no nanomboka nihira ny sangisangy frantsay izay nampianarina ny Blanche voalohany nataon'ny anabavin'i Alain vadiny taloha. Tsy naheno na nandre tao an-tranony nandritra ny sivy taona io sangisangy frantsay io. Tsy nisy nanodidina ny Blanche faharoa nahalala na niteny Frantsay.
Rehefa nanontany ireo ray aman-dreniny hoe iza no nampianatra azy ny sangisangy frantsay, dia hoy ny faharoa Blanche: "Tsy misy olona iray, fantatro fotsiny izany." Nanohy nihira ilay sangisangy izy avy eo. (2)
Xenoglossy recitative: Ity tranga ity dia mampiseho ny zavatra nolazain'i Ian Stevenson, MD, ny hoe xenoglossy, izay ahafahan'ny olona miteny na mamaky fiteny izay tsy nianatra tamin'ny fomba mahazatra.
Ny valiny xenoglossy, izay mifanohitra amin'izany, dia midika hoe olona iray izay tsy afaka mamaky teny tsy fantatra fotsiny ihany, fa mamaly sy miresaka amin'ny fiteny tsy fantatra.
Fifandraisana vaovao navaozina tamin'ny nateraky ny fanambadiana: Ity tranga ity dia mampiseho fa afaka mamindra fo ao anatin'ny fianakaviana iray ihany ny olona, ​​mety ho voafatotry ny fifamatorana ara-pihetseham-po sy karmic.
Fitoviana ara-batanae: Flornida sy Signora Bautista dia nahatsikaritra fitoviana mazava teo amin'ny Blanche 1 sy 2. Mazava ho azy fa azo lazaina fa misy ny fototarazo. Sarin'ireo ankizivavy roa ireo, indrisy, tsy hita.
Ny Fanahy Mitarika: Ity tranga ity dia manaporofo ny fisian'ny fanahy, araka ny hita fa tonga tao Signora Bautista ny fanahin'ny White Blan voalohany ary nampita izy fa ho teraka amin'ny ray aman-dreniny indray.
Mariho tsara fa ny saripika omena etsy ambony dia tsy tena sarin'i Blanche Bautista, fa fampihetsiketsehana.
1. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2008, pejy 22
2. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2008, pejy 23